माघ २४ गते । शुक्रवार । श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन, हेर्नुहोस !! - News20 Media
February 7, 2020 February 7, 2020 N20LeaveaComment on माघ २४ गते । शुक्रवार । श्री पशुपतिनाथको दर्शन गरि के-कस्तो छ तपाइको आजको दिन, हेर्नुहोस !!
सामान्य आर्थिक त’नाबको सा’मना गर्नुपर्ला । का’र्यसम्पादनमा सामान्य ढि’लाईको योेग रहेकोछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य ति’क्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । वाणिका कारण सामान्य वा’दविवादको स’म्भाबना रहनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य त’नाव उ’त्पन्न हुन सक्नेछ । पारिवारीक झ’मेलाले स’ताउन सक्नेछ ।
पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । आफन्तजनहरुको साथ सहयोगमा ज’टिल का’र्यहरु स’म्पादित रहनेछन । बिद्यार्थी बर्गका निम्ती समय मध्यम रहनेछ । सामान्य यात्रा प’श्चात मनग्य आम्दानी प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य शुख प्राप्त रहने दिन रहेकोछ
स्वा’स्थका कारण का’र्यक्षेत्रमा सामान्य त’नाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु बाटँ टाढा भएको अ’नुभव हुनेछ । नयाँ लगानिमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा आम्दानि मध्यम रहला । अनावश्यक खर्चका कारण तात्कालिक आर्थिक अ’भाब रहन सक्ने स’म्भाबना रहेको छ ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको साथ सहयोगमा नयाँकार्य थालनिका अवसरहरु प्राप्त रहनेछन । पूराना लगानि उठाउन उचित समय रहेकोछ । सामान्य वा’दबिवादको झ’मेलामा फ’सिएला।सा मान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा तथा रचनात्मक का’र्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
का’र्यक्षेत्रमा लगाईएको त’त्परताको बिशेष क’दर हुन सक्नेछ । सामाजिक का’र्यको क्षेत्रमा जु’ट्ने समय रहेकोछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा म’धुरता छाउनेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको सहयोगमा आम्दानी उत्तम रहन सक्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
का’र्य स’म्पादनमा गो’पनियताको आवश्यकता रहनेछ । तपाई द्वारा स’म्पादित का’र्यको श्रेय गै’र ब्यत्तित्व हरुले प्राप्त गर्नेछन । मित्रजनहरु सगको सम्बन्धमा सामान्य ति’क्तता उ’त्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँ मित्र प्राप्ती भएतापनि प्र’तिपक्क्षीहरु स’बल रहनेछन ।ईष्टमित्रजनको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनाले ज’टिलकार्य स’म्पादितहुनेछन ।
गरीरहेको का’र्यमा सामान्य झ’न्झट उ’त्पन्न हुन सक्नेछ । नजिकका ब्यत्तिहरुबाट धो’काहुन सक्ने स’म्भाबना रहेकोछ । न’याँकार्यको थालनि नगर्नुहोला । स्वा’स्थमा सा’मान्य स’मस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष सा’बधानि अपनाउनु उत्त’म रहनेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि ला’भदायक सा’बित रहनेछ ।
म’नोबिलासिताका सा’धनको खरिद तथा प्रयोगमा सामान्य खर्चहुन सक्नेछ । पारीवारिक झो’र झ’मेलाले सताउन सक्ने समय रहेकोछ । अ’धुराकार्यहरु स’हजतापुर्ण स’म्पादीत रहनेछन । प्रेम सम्बन्धमा म’धुरता छाउनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा दिन मध्यम रहनेछ । शारीरिक आ’लस्यताका कारण कार्य क्षेत्रमा सा’मान्य ढि’लाईको यो’ग बन्नेछ ।
स्वा’स्थमा सामान्य स’मस्या उ’त्पन्नहुन सक्नेछ । प्र’तिश्पर्दाजन्य का’र्यमा तपाईको अ’ब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । शुभचिन्तकहरुको साथसहयोगमा ब्यापार ब्यवसायमा म’नग्य लाभ प्राप्त रहनेछ ।ता’त्कालिन यात्राको स’म्भाबना रहेकोछ । गरीरहेको का’र्य स’म्पादनमा सामान्य ढि’लाईको सा’मना गर्नु पर्नेछ । मानसम्मानमा आ’चँ आउन सक्नेछ ।
बिशिष्ट ब्यत्तिहरुको अनु’शरणले सामान्य झन्झ’टका बिचमापनि का’र्य स’म्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा अ’धिक समय ब्य’तितरहेता पनि उ’त्तम प्र’तिफल प्राप्त हुनेछैन । र’चनात्मक तथा क’लाकौशलको प्रयोगले आम्दानीको क्षेत्र द’रीलो बन्नेछ । नयाँ का’र्यको थालनिले मन ह’र्षित तुल्याउला ।
पारीवारिक झो’रझमेलाले स’ताउन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य त’नाब उ’त्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको का’र्यमा समेत समस्या उ’त्पन्नहुनाले मनमा खि’न्नता बो’ध हुनेछ ।मान्यजनहरुको स्वास्थमा सा’मान्य स’मस्या दे’खा पर्नेछ । स’भासम्मेलनका क्षेत्रमा स’रीक रहने अ’वसर प्राप्त रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायमा दिन म’ध्यम रहनेछ ।
आ’त्मबलमा बृ’द्धिहुनाले अ’धुरा का’र्यसमेत स’म्पादित रहनेछन । मित्रजनहरुको स’हयोगमा आम्दानिका श्रोतहरु दरीला बन्नेछन । ता’त्कालिक धनलाभ हुन सक्नेछ । धार्मीक क्षेत्रको यात्राको स’म्भाबना रहेकोछ । ईष्टमित्रजनको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनाले ज’टिलकार्य स’म्पादितहुनेछन साथै का’र्य स’म्पादनको श्रे’य प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
लाख बत्तिको दर्शनसँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस,
आज शुक्रबार, कति शुभ छ तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल